बाह्य पहुँचका लागि आन्तरिक पीसी कन्फिगर गर्दै Martech Zone
बाह्य पहुँचका लागि आन्तरिक पीसी कन्फिगर गर्दै
सोमवार, जुलाई 7, 2008 शुक्रबार, जनवरी 11, 2013 Douglas Karr
फायरवालहरू र राउटरहरूको प्रयोगको साथ, इन्टरनेट मार्फत अर्को कम्प्युटरमा जडान गर्नु वास्तविक चुनौती भएको छ। यदि तपाईं आफ्नो कम्प्युटर कन्फिगर गर्न चाहानुहुन्छ भने बाह्य पहुँच सम्भव छ, त्यहाँ केहि गहिराइ कन्फिगरेसन परिवर्तनहरू छन् जुन तपाईंलाई तपाईंको नेटवर्कमा बनाउन आवश्यक पर्दछ।
तपाईंको IP ठेगाना वा DynDns ठेगाना प्राप्त गर्नुहोस्
तपाईंलाई पत्ता लगाउनको लागि पहिलो चरण तपाईंको ठेगाना प्राप्त गर्नु हो। इन्टर्नेट संसारमा, यो आईपी ठेगानाको रूपमा चिनिन्छ र सजिलै ट्र्याक गर्न सकिन्छ।
स्ट्याटिक (अपरिवर्तनशील) IP ठेगाना वा डायनामिक (परिवर्तन) आईपी ठेगाना छ कि छैन भनेर फेला पार्नुहोस्। संभावना छ कि यदि तपाईं DSL वा DSL प्रो हुनुहुन्छ कि तपाईंसँग एक डायनामिक IP ठेगाना छ। यदि तपाईं Business DSL वा केबल मोडेममा हुनुहुन्छ भने, तपाईं सम्भवतः स्थिर हुनुहुन्छ।
यो IP ठेगाना हो जुन तपाईंको नेटवर्कमा तपाईंको प्रवेश द्वारमा तोकिएको हो। यदि तपाईं स्थिर हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ चिन्ताहरू छैन। यदि तपाईं गतिशील हुनुहुन्छ भने, सेवाको लागि साइन अप गर्नुहोस् जस्तै गतिशील DNS। प्राय: आधुनिक राउटरहरूसँग DynDNS सँग कुराकानी गर्ने क्षमता छ तपाईंको आईपी ठेगाना अपडेट राख्न। त्यसो भए तपाईको आईपी ठेगाना कसैलाई उपलब्ध गराउनु भन्दा तपाईले उनीहरूलाई डोमेन उपलब्ध गराउनुहुनेछ जस्तो कि फेडमेमहोमेनेट.net।
यदि तपाईंलाई तपाईंको बाह्य आईपी ठेगाना थाहा छैन भने, तपाईं साईटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि मेरो आईपी ठेगाना के हो पत्ता लगाउनका लागि.
तपाइँको DynDns वा IP ठेगाना पिंग गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् यदि तपाइँ प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुहुन्छ ("कमाण्ड प्रम्प्ट" वा "टर्मिनल" खोल्नुहोस् र चलाउनुहोस्: ping findme.homeip.net
यदि तपाईंले कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुभएन भने, तपाईंले तपाईंको राउटरको कन्फिगरेसनमा पिंग सक्षम गर्न आवश्यक पर्दछ। तपाईंको राउटरको कागजातमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
तपाईंको राउटरमा PORT फर्वार्डिंग सक्षम गर्नुहोस्
अब जब हामीसँग तपाईंको ठेगाना छ, के जान्नु महत्त्वपूर्ण छ ढोका प्रविष्ट गर्न तपाइँको घर मार्फत। यसलाई कम्प्यूटरमा PORT भनेर चिनिन्छ। बिभिन्न अनुप्रयोगहरूले बिभिन्न PORTs प्रयोग गर्दछ, त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीसँग सही PORT खोलेको छ र तपाईंको कम्प्युटरमा रूट गरिएको छ। पूर्वनिर्धारित रूपमा, राउटरहरूको बहुमत सबै पोर्टहरू बन्द छ त्यसैले कोही तपाईंको नेटवर्कमा प्रवेश गर्न सक्दछन्।
गन्तव्य पीसीसँग कुराकानी गर्न स्रोत पीसीको लागि, तपाईंको राउटरले तपाईंको पीसीमा ट्राफिक निर्देशित गर्न आवश्यक छ।
हामीले तपाईंको नेटवर्कको लागि स्ट्याटिक आईपी ठेगानाको महत्त्वको बारेमा कुरा गर्‍यौं, अब यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं आफ्नो आन्तरिक नेटवर्कमा तपाईंको पीसीको लागि स्थिर आईपी ठेगाना छ। तपाईंको राउटर कागजातलाई सन्दर्भ गर्नुहोस् कसरी तपाईंको आन्तरिक पीसीको लागि स्थिर आईपी ठेगाना कन्फिगर गर्ने सम्बन्धमा।
कुन प्रकारको अनुप्रयोगमा तपाइँ जडान गर्न चाहानुहुन्छ, निर्भर गर्दै, तपाइँले तपाइँको पीटरको आन्तरिक स्थिर IP ठेगानामा राउटरबाट PORT फर्वार्डिंग सक्षम गर्नुपर्नेछ।
HTTP - यदि तपाइँ तपाइँको आन्तरिक पीसीको वेब सर्वर चलाउन चाहनुहुन्छ र यसलाई बाह्यमा पहुँचयोग्य बनाउन चाहानुहुन्छ भने, पोर्ट forward० अग्रेषित गर्नु पर्छ।
PCAnywhere - 5631 5632१ र XNUMX XNUMX२ फर्वार्ड गर्नु पर्छ।
VNC - 5900 XNUMX०० लाई फर्वार्ड गर्न आवश्यक पर्दछ (वा यदि तपाइँ बिभिन्न पोर्ट कन्फिगर गर्नुभयो भने, त्यसलाई एक प्रयोग गर्नुहोस्)।
तपाईंको पीसीमा फायरवाल सेटिंग्स सक्षम गर्नुहोस्
उही PORTS जुन तपाईंले आफ्नो पीसीमा फर्वार्ड गर्नु भएको छ तपाईंको पीसीको फायरवाल सफ्टवेयरमा सक्षम पार्नु पर्छ। तपाईंको फायरवाल दस्तावेज र कसरी बाह्य पहुँचयोग्य बनाउन चाहानुहुन्छ अनुप्रयोग र / वा पोर्टहरू सक्षम गर्ने सन्दर्भमा हेर्नुहोस्।
यी कन्फिगरेसन परिवर्तनहरू बनाउन सजिलो छैन, तर यो सबै राम्रोसँग कार्य गरिसके पछि तपाईंले आफ्नो पीसी पहुँच गर्न सक्षम हुनुपर्दछ जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ तपाईंको छनौटको आवेदन मार्फत।
NOTE: जस्तोसुकै प्रोग्राम प्रयोग गरिरहनु भए पनि, धेरै गाह्रो प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड लागू गर्न नबिर्सनुहोस्! ह्याकरहरू खुला पोर्टहरूको खोजीमा नेटवर्कहरू स्काउ गर्न चाहन्छन् कि उनीहरूले पीसीहरू पहुँच गर्न र / वा कमांडर गर्न सक्दछन् भनेर। थप रूपमा, तपाईले आईपी ठेगानाहरूलाई प्रतिबन्ध गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं पहुँच प्रदान गर्नुहुनेछ।
मार्केटिंग टेकब्लॉग.कमा डोमेन परिवर्तन भयो
साउथसाइड Smoosier टेक क्लब